ဒေတာချွေတာပြီးတော့ဒေတာများကို Manager ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အင်တာနက်က Apps ကပ » ဒေတာချွေတာပြီးတော့ဒေတာများကို Manager ကိုဒေတာကိုအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်
ဒေတာချွေတာပြီးတော့ဒေတာများကို Manager ကိုဒေတာအသုံးပြုမှု APK ကိုထိန်းချုပ်ရန်
ဒေတာချွေတာ: ဒေတာမန်နေဂျာနှင့်ဒေတာအသုံးပြုမှုများအတွက် App ကိုသငျသညျမိုဘိုင်းဒေတာ Analyzer, မိုဘိုင်းဒေတာမန်နေဂျာနှင့် ပတ်သက်. အစဉ်အမြဲစိတ်ပူဖြစ်ပါသလား အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာချွေတာနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူဒေတာအသုံးပြုမှုအခမဲ့ခြေရာခံနှင့်မိုဘိုင်းဒေတာသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ စမတ်ဒေတာ mode ကိုချွေတာနှင့်တကွ, ဒေတာချွေတာ 4G app ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဒေတာပိုပြီးထိရောက်, သင်ပိုမိုဒေတာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဒေတာအသုံးပြုမှုကိုကယ်တင်ကူညီပေးပါမည်။
အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့ data ကိုမန်နေဂျာ application ကိုရှေးခယျြသင့်သလဲ
⭐လွယ်ကူမှာ Data ထိန်းချုပ်ရေး: ဒီ function ကိုသငျသညျပလီကေးရှင်းဒေတာအသုံးပြုမှုကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုကယ်တင်ရန်သင့်ထိန်းချုပ်မှုထဲက get လျှင်သင်ဒေတာ applications များပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။ ဒေတာမန်နေဂျင်း၏ real-time စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု။
⭐စူပါဒေတာချွေတာမုဒ်: ဒေတာထိန်းချုပ်နှင့်ကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ဒေတာမိုဘိုင်းကယ်တင်နှင့်အချက်အလက်ချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။ ရှည်သောကာလ၌မိုဘိုင်းဒေတာ packages များအသုံးပြုခြင်း။
⭐အဘယ်သူမျှမ packet ကိုကန့်သတ်နှင့်အတူအနှောက်အယှက်: သင်ပိုမိုရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ပိုပြီးအွန်လိုင်းသီချင်းနားထောင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဒေတာအသုံးပြုမှု၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲဝဘ်ကိုရယူရန်နိုင်ပါတယ်။
⭐အဆိုပါပူဖောင်း tracker တွင်သင်အသုံးပြုနေဘယ်လောက် data တွေကိုကြည့်ရှုကူညီပေးသည်
⭐အခမဲ့ဒေတာ tracker နှင့်အချက်အလက်ထည့်သွင်းသုံးချွေတာ app ကို 4G
လျှောက်လွှာဒေတာမန်နေဂျာဆောင်တတ်၏သောကြီးသောအမှုတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ယနေ့မိုဘိုင်းဒေတာချွေတာလျှောက်လွှာကို Download လုပ်ပါ။ ဒေတာချွေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲအွန်လိုင်းဝဘ် surfing, ဒေတာအသုံးပြုမှုစီမံခန့်ခွဲ။
သင်ဤမိုဘိုင်းဒေတာအာနိသင်တိုးမြှင့် app ကိုချစ်ကြလျှင်, သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကမျှဝေသည်ငါတို့အဘို့5* ထောက်ခံပါတယ်။
1.1.2 ver Update ကို, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
+ shared ဒေတာပမာဏအပေါ်တစ်ဦးကန့်သတ်မှုကိုသတ်မှတ်မည်
+ App က & တစ်နေ့လျှင်ကြည့်ရှုဒေတာအသုံးပြုမှုအကြား Switch
ဒေတာချွေတာပြီးတော့ဒေတာများကို Manager ကိုဒေတာကိုအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်
Microsoft ကပါဝါ ...